About Company Chuangmei Intelligent Technology Co., Ltd. ọkachamara na R&D, imewe na mmepụta nke iche iche latex uwe mmepụta edoghi, nitrile uwe mmepụta edoghi, ịkwanyere uwe mmepụta edoghi, condom ígwè na akụrụngwa, metụ akwa igwe na ...
Uru nke Chuangmei glove production line: 1) ntinye igwe na -emepụta ngwa ngwa, nke nwere akụrụngwa ngụkọta akụrụngwa, nwere ike ịchekwa 1/3 nke ọrụ ma melite arụmọrụ nke ọma. 2) The tozuru okè sọrọ-mode elu-ọsọ nzukọ akara imewe nwere ihe ...
Banyere Company Company Honor ...
Kedu ụdị ngwa ọrụ mmepụta glove ị na-eweta? Nwere ike ịme uwe aka na-enweghị ntụ ntụ? Ulo nitrile, mkpịsị aka latex, ogwe aka PVC na uwe a gwara agwa. Enwere ike iji ya ma ọ bụ na-enweghị ntụ ntụ dịka ndị ahịa chọrọ ...